Tonga namonjy tany Guinea i Belzika
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Tonga namonjy tany Guinea i Belzika
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana Ginea • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • Tourism • Dinika fizahan-tany • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Toy ny eran'izao tontolo izao dia voan'ny areti-mandringana i Guinea. Saingy, ny toe-pahasalamana dia vao mainka sarotra amin'ny alàlan'ny valanaretina kitrotro, areti-mifindra amin'ny tazo mavo, ary tato ho ato koa ny areti-mifindra Ebola vaovao izay niara-nametraka olana lehibe teo amin'ny toeram-pitsaboana.
Guinea dia firenena any Afrika Andrefana, manamorona ny andrefany ny Oseana Atlantika. Fantatra amin'ny fiarovana ny natiora Mount Nimba Strict, atsimo atsinanana. Miaro ny tandavan-tendrombohitra misy ala sy manan-karena zavamaniry sy biby teratany ny tahiry, anisan'izany ny chimpanzees sy ny toad viviparous. Eo amoron'ny morontsiraka, Conakry renivohitra, dia misy ny Grand Mosque maoderina sy ny National Museum, miaraka amin'ireo vakoka isam-paritra.
Androany, Belzika dia mandefa maska ​​760,000 any Conakry amin'ny alàlan'ny mekanisma fanampiana vonjy maika B-FAST. Amin'izany,
Belzika dia mamaly ny fangatahana fanampiana natolotr'i Guinea ny mekanisma fiarovana sivily eropeana (UCPM) ho ampahany amin'ny ady atao amin'ny COVID-19.
Belzika dia maniry ny haneho ny firaisankinany amin'ireo mponina Gineana, izay iharan'ny fijaliana lehibe.
Amin'ny alàlan'ny FPS Public Health, ny firenentsika dia manome saron-tava fandidiana 600,000 sy KN160,000 95. Ho fampahalalanao: Belzika dia manana sarontava fandidiana FFP10.2 / KN2 sy 95 tapitrisa 147.9 tapitrisa. Ny raharaham-bahiny FPS, miaraka amin'ny mpiara-miasa tsy miankina, dia manome ny fitaterana ny saron-tava amin'ny sidina fiaramanidina mankany Conakry renivohitra Gineana. Ho an'ny vidin'ny fitaterana, ny B-Fast dia afaka miantehitra amin'ny vola fanampiana amin'ny ampahany amin'ny Vondrona eropeana.
Ny fiaraha-miasa amin'ny raharaham-bahiny sy ny fampandrosoana FPS dia mandrindra ity fandefasana B-FAST ity, rafitra iray izay, ankoatry ny Biraon'ny praiminisitra, ny FPS Fahasalamam-bahoaka, ny fiarovana, ny FPS anatiny ary ny FPS Bosa dia tafiditra ihany koa amin'ny fanohanana ara-pitaovana sy ara-pitantanana. . Raha mila fanazavana fanampiny momba ny mekanisma B-FAST: B-FAST.
SOURCE Foreign Foreign, Foreign Trade and Development fiaraha-miasa, Belzika